Smart Touch Wall Light Switch သည် အဆင်ပြေပြီး အရေးအကြီးဆုံးမှာ ဘေးကင်းမှုဖြစ်သည်။ 1-gang မှ 3-gang သို့ စမတ်ခလုတ်များစွာကို ထည့်သွင်းပါ။ ခလုတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကို အက်ပ်မှတစ်ဆင့် သီးခြားထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင့်စက်ပစ္စည်းများကို မည်သည့်နေရာမှ ထိန်းချုပ်ရန် မည်သည့်မျက်နှာပြင်အတွက်မဆို အသုံးပြုနိုင်သည်။ စမတ်အိမ်ခလုတ်များ၊ Relay Status နှင့် Backlight Switch ပါသော Smart Life Muilti-Control Association အက်ပ်ကို တပ်ဆင်ရန် လွယ်ကူပြီး ပျော်စရာကောင်းသည်။ အဝေးထိန်းခလုတ်သည် Alexa၊ Google Home၊ 1/2/3 Gang White/Black/Gold ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Smart Touch Wall Light Switch ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ
1. Smart Touch Wall Light Switch ၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
-Remote Control- အဝေးထိန်းလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော စမတ်ထိတွေ့ နံရံမီးခလုတ်။ ဖုန်းတွင် Smart Life နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော 2G/3G/WIFI ကွန်ရက်ရှိသရွေ့ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား အဝေးမှထိန်းချုပ်ရန် စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြုသူသည် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- အသံထိန်းချုပ်မှု- အသံထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသော စမတ်ထိတွေ့ နံရံမီးခလုတ်။ Amazon Alexa (Echo/Dot/Dot/Tap)၊ Google Assistant၊ IFTTT တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်အသံဖြင့် မီးများကိုဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန် Amazon Alexa သို့မဟုတ် Google Home ဖြင့် လေယာဉ်လက်မှတ်ကောင်တာတွင် hub မလိုအပ်ပါ။
- အချိန်ဇယား- နေ့စဉ်အချိန်ဇယားဆွဲခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဤခလုတ်အတွက် အချိန်ကိုက်သတ်မှတ်ပြီးနောက် အသိဉာဏ်ရှိသောအချိန်တိုင်းကိရိယာခလုတ်သည် အလိုအလျောက်ပွင့်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ သင့်အား သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောလူနေမှုပုံစံကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. Smart Touch Wall Light Switch ၏ ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်များ
- ခလုတ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စက်ပစ္စည်းများသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့ကို အက်ပ်မှတစ်ဆင့် သီးခြားထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
- အင်တာနက်မှ WiFi တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု၊ ဂိတ်ဝေးမလိုအပ်ပါ။
- ထိတွေ့ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် 3mm crystal tempered glass ကိုအသုံးပြုပါ။
- 3G/4G/WiFi မှတစ်ဆင့် Smartlife အက်ပ်တွင် အဝေးထိန်းစနစ်
- Amazon Alexa/Google Home/ IFTTT ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
- အုပ်စုတစ်ခုစီအတွက် timer လုပ်ဆောင်ချက်
- အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက် Scene လုပ်ဆောင်ချက်၊ ချိတ်ဆက်ထားသောစက်ပစ္စည်းအုပ်စုများအတွက် စမတ်မြင်ကွင်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
- App တွင်အချိန်နှင့်တပြေးညီအခြေအနေပြသသည်။
- LED Noctilucent Navigation၊ ပေါ့ပါးသော panel နှင့် ထိလွယ်ရှလွယ်သော ခလုတ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် သင့်အိမ်အတွက် ခေတ်မီသောခံစားမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ သင့်အိမ်ရှိ မည်သည့်အခန်းနှင့်မဆို လိုက်ဖက်ရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ LED ညွှန်ပြချက်သည် ခလုတ်များကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေပြီး မှောင်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် မီးများကိုဖွင့်ပေးသည်။
- ပါဝါဖြတ်လိုက်သောအခါ အခြေအနေမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက်
- အသံထိန်းချုပ်မှုကို ပံ့ပိုးသည်- Amazon Alexa/Google အကူအညီ/ IFTTT ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါ။
3. Smart Touch Wall Light Switch ၏ ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ
â€¢ Input Voltage: 100V-240V 50/60Hz
â€¢ Max လက်ရှိ :10A/ဂိုဏ်း
â€¢ Max Load: 800W/Gang (ခုခံနိုင်သောဝန်)
â€¢ဝါယာကြိုး- တိုက်ရိုက်ဝါယာကြိုးနှင့် Neutral ဝါယာကြိုး
â€¢ Wireless Frequency WiFi 2.4GHz
â€¢ WiFi Standard IEEE 802.11 b/g/n
â€¢ အလုပ်ဘဝ 100 000 ကြိမ်
â€¢ ပစ္စည်းများ Tempered Glass + PC မီးမလောင်အောင် အကာအကွယ်
မော်ဒယ် ZC-701 ZC-702 ZC-703
ထိန်းချုပ်ဂိုဏ်း ၁ ဂိုဏ်း ၁ လမ်း ၂ဂိုဏ်း ၁လမ်း ၃ဂိုဏ်း ၁လမ်း
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား AC110V/AC220V
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ 1000w 2000w
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကြိမ်နှုန်း 50Hz/60Hz
ကြိုးမဲ့အမျိုးအစား Wi-Fi 2.4GHz
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ Null & တိုက်ရိုက်လိုင်း
Panel Material Crystal glass panel၊ အရည်အသွေးမြင့် မီးမမှီသော PC အောက်ခြေအိတ်
တင်ရန်သက်ဆိုင်ပါသည်။ မီးချောင်း၊ မီးချောင်း၊ LED မီးခွက်၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေးမီးခွက် စသဖြင့်ပေါ့။
တုံ့ပြန်မှုအရှိန် 100ms ထိတုံ့ပြန်မှုမြန်နှုန်း
hot Tags:: Smart Touch Wall Light Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းချမှု၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့ရှယ်ယာထဲတွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်